Eleven ကို စှဲဆိုထားတဲ့အမှု ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရ ရုပျသိမျးမညျ – Media9
November 9, 2018 by media9
Eleven Media သတင်းသမားများ ရုံးထုတ်လာစဉ်
ELEVEN ဂျာနယ်သတင်းသမားသုံးဦးကို နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅(ခ) နဲ့ တရားစွဲဆိုထားမှုကို အစိုးရမှ တရားစွဲဆိုထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ ဆက်လက်ညှိုနှိုင်းသွားဖို့ လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုထားပြီး eleven ဘက်ကဒီသတင်းမှား ယွင်းမှုအတွက် ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့လည်းပြောဆိုထားကာ ဒီလိုမဖြေရှင်းပေးပါက အမှုပြန်လည်လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ အမြင်တွေကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မေခက စုစည်းတင်ပြသွားပါမယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ အစိုးရမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ MRTV၊ Mitv နဲ့ Sky Net သတင်းဌာနတို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ အခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီအမှုကို ဆက်ရုပ်သိမ်းဖို့ကျနော်တို့ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ စာနယ်ဇင်းကောင်စီညှိုနှိုင်း ပြီးရလဒ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါမယ်။ကျနော်တို့ဘက်ကမှားယွင်းကြောင်း ပြန်ဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို eleven မီဒိယာဘက်ကလိုက်နာမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြေပြီးစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်နာတာမရှိဘူးဆိုရင် စာနယ်ဇင်းကောင်စီညှိုနှိုင်းမှုမအောင်မြင်ရင် ဥပဒေကြောင်းအရဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
ELEVEN ဂျာနယ်မှာ အောက်တိုဘာလ ၈ရက်က ပါခဲ့တဲ့ ‘အမြဲရှုံးနေတဲ့ စက်သုံးဆီဆိုင်တွေ ပိတ်ရေး၊ ငွေချေးသူ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ ကျောင်းကားနဲ့ လူနာမည်ပေါက် ပြည်သူ့ရှယ်ယာ’ ဆောင်းပါး ဟာတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ပြည်သူ များက ယုံကြည်မှုပျက်စေပြီး အကြည်ညိုပျက် စေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ Eleven Media Group မှ ဆောင်းပါးရှင် ဖြိုးဝေအပါအဝင် အယ်ဒီတာချုပ် ကိုကျော်ဇော လင်းနှင့် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုနရီမင်းတို့ကို တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က ပုဒ်မ-၅၀၅(ခ)နဲ့ တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမှုတိုင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဘက်က စာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့ ညှိုနှိုင်းလုပ်ဖို့ ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရဘက်ကို ညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုညွှန်ကြားချက် အပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းမှာeleven သတင်းသမားတွေကို အာမခံပေး ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မနက်ဖန် ထပ်လုပ်မယ့် ရုံးချိန်းမတိုင်မှီမှာ အခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာဥပဒေရှိရဲ့သားနဲ့ အာမခံပေးရန်ခက်ခဲတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တဲ့ အပေါ် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။
“အမှုရုပ်မှာက လမ်းကြောင်းအမှန်ပါ။ စစချင်းလုပ်ထားတာက လမ်းကြောင်းမှားနေတာပေါ့နော်။ သမ္နတညွှန်ကြားချက်ကြောင့် အခုလိုဖြစ်လာတာကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမညှိုခင်ဘာရမှ ဆိုတာကတော့ ကြိုတင်ပြီးတော့ ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်မလား၊ နဂိုထဲကဒါရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ အပေါ်စီးဆန်တယ်။ မီဒီယာဘက်ကလည်း ပြန်ရှင်းဖို့ရှိသေးတယ်။ ကြိုတင်ပြီးတခုခုလုပ်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်”
မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်းက သတင်းစာဆရာ ကိုဇေယျာလှိုင်ကတော့
“သမ္မတရုံးညွှန်ကြားချက်အရ ကောင်စီသွားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာ။ ဒါကိုမသွားခဲ့ဘူး။ ကောင်စီမလာချင်လို့ဆိုရင် သတ္တိရှိရင်ကောင်စီမလာနဲ့ပေါ့. စလာထဲက ကောင်စီကို မလာဘဲ ချက်ချင်းဖမ်းရတဲ့ ဥပဒေနဲ့ စွဲထဲက မီင်္ဒိယာကိုစေတနာမရှိတာပေါ်တာဘဲ ဒါကြောင့် သမ္မတကကြားဝင်ရတယ်။ ကြားဝင်တာမှာလည်းချက်ချင်းလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အမှန်က အချိန် ဆွဲထားတာဘဲလေ. အဲထဲက မီဒီယာအပေါ်စေတနာမထားတာတွေ့ရတာဘဲလေ”
မနက်ဖြန် မှာ အလဲဗင်းသတင်းထောက်တွေရဲ့ ရုံးချိန်းရှိနေပြီး ဒီရုံးချိန်းမှာ အမှုရုပ်သိမ်းသွားဖွယ်ရှိပါတယ်။
“ဒီအမှုကို ဆကျရုပျသိမျးဖို့ကနြျောတို့ဆကျလုပျသှားမှာပါ။ စာနယျဇငျးကောငျစီညှိုနှိုငျး ပွီးရလဒျကိုစောငျ့ကွညျ့ပါမယျ။ကနြျောတို့ဘကျကမှားယှငျးကွောငျး ပွနျဖျောပွဖို့တောငျးဆိုထားပါတယျ။ ဒီအခွအေနကေို eleven မီဒိယာဘကျကလိုကျနာမယျဆိုရငျ အဆငျပွပွေပွေီးစီးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ လိုကျနာတာမရှိဘူးဆိုရငျ စာနယျဇငျးကောငျစီညှိုနှိုငျးမှုမအောငျမွငျရငျ ဥပဒကွေောငျးအရဆကျသှားမှာဖွဈပါတယျ”
“အမှုရုပျမှာက လမျးကွောငျးအမှနျပါ။ စစခငျြးလုပျထားတာက လမျးကွောငျးမှားနတောပေါ့နျော။ သမ်နတညှနျကွားခကျြကွောငျ့ အခုလိုဖွဈလာတာကွိုဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှမညှိုခငျဘာရမှ ဆိုတာကတော့ ကွိုတငျပွီးတော့ ကနျ့သတျခကျြဖွဈမလား၊ နဂိုထဲကဒါရမှဖွဈမယျဆိုတာကတော့ အပျေါစီးဆနျတယျ။ မီဒီယာဘကျကလညျး ပွနျရှငျးဖို့ရှိသေးတယျ။ ကွိုတငျပွီးတခုခုလုပျမယျဆိုတာကွီးကတော့ မကောငျးဘူးထငျပါတယျ”
“သမ်မတရုံးညှနျကွားခကျြအရ ကောငျစီသှားဖို့ညှနျကွားခဲ့တာ။ ဒါကိုမသှားခဲ့ဘူး။ ကောငျစီမလာခငျြလို့ဆိုရငျ သတ်တိရှိရငျကောငျစီမလာနဲ့ပေါ့. စလာထဲက ကောငျစီကို မလာဘဲ ခကျြခငျြးဖမျးရတဲ့ ဥပဒနေဲ့ စှဲထဲက မီင်ျဒိယာကိုစတေနာမရှိတာပျေါတာဘဲ ဒါကွောငျ့ သမ်မတကကွားဝငျရတယျ။ ကွားဝငျတာမှာလညျးခကျြခငျြးလုပျခဲ့တာ မဟုတျဘူးလေ။ အမှနျက အခြိနျ ဆှဲထားတာဘဲလေ. အဲထဲက မီဒီယာအပျေါစတေနာမထားတာတှရေ့တာဘဲလေ”
ရနေကျဆိပျကမျး စိမျချေါမှုမြား နှငျ့ အလားအလာ